Obi ụtọ na Halloween ~~~~ -News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Obi ụtọ na Halloween ~~~~
Oge: 2020-10-30 Hits: 18
A na-akpọ Halloween All Saints Day. Ọ bụ emume ọdịnala ọdịda anyanwụ nke ọnwa Nọvemba n’afọ ọ bụla; na October 1, mgbede nke Halloween, bụ oge kachasị ezumike nke ezumike a. N’asụsụ Chinese, a na-asụgharị Halloween dị ka ụbọchị nke ndị nsọ niile. Iji mee ememme Halloween, ụmụaka ga-eji ejiji ka mmụọ mara mma ma kụọ aka n'ọnụ ụzọ site n'ụlọ ruo n'ụlọ, na-arịọ swiiti, ma ọ bụghị Ga-aghọ aghụghọ ma ọ bụ na-emeso. N'otu oge ahụ, a na-ekwu na n'abalị a, mmụọ dị iche iche na nnukwu anụ ga-eyi uwe dịka ụmụaka wee sonye n'ime igwe mmadụ ahụ iji mee emume nke Halloween, ụmụ mmadụ ga-eyikwa uwe dị ka mmụọ dị iche iche iji mee ka mmụọ ndị ahụ kwekọrịta. .
Ememme Halloween kacha ewu ewu na mba ndị na-asụ Bekee, dịka British Isles na North America, ndị Australia na New Zealand na-esote. N'oge a, ọgbọ na-eto eto n'ụfọdụ mba Eshia chọkwara ime “Ememme Ofesi”. N’ụbọchị mgbede nke Halloween, ụfọdụ nnukwu ụlọ ahịa mba ofesi ga-edozi akara ga-ere ihe eji egwuri egwu Halloween, obere ndị na-ere obere ahịa ga-eresịkwa ụfọdụ ụmụ bebi ma ọ bụ ụdị metụtara Halloween iji dọta Anya nke ndị na-eto eto.
Ememme Halloween na bekee bụ ụbọchị nsọ niile, nke a makwaara dị ka "All Saints", otu n'ime ụbọchị ụka ndị Katọlik na Ọwụwa Anyanwụ, ma bụrụkwa ezumike ọdịnala na mba ndị ọdịda anyanwụ. Mpaghara ndị na-asụ Chinese na-emejọ Halloween maka Halloween. "Hallow" sitere na Middle English halwen, nke dị nnọọ nso na etymology nke nsọ. N'ebe ụfọdụ nke Scotland na Canada, a ka na-akpọ Halloween "All Hallow Mas". N'ụbọchị ahụ, Mass a ga-eme bụ iji mee emume nsọ niile (Hallow) n'eluigwe. Ugbu a ọha mmadụ na-ahazi ọrụ dịgasị iche iche jupụtara na ndị mmụọ ọjọọ na ndị mmụọ n'abalị nke Ọktọba 31 maka ọdịmma azụmahịa ma ọ bụ ebumnuche ndị ọzọ, na-agbadata kpamkpam na nzube dị nsọ nke Halloween.
Previous: Inye ekele jupụta obi na ekele
Ọzọ: Nationalbọchị Ọchịchị Chinesebọchị China na Mid-mgbụsị akwụkwọ